Viber For PC (ကွန်ပျူတာမှ Viber ကို မြန်မာလို ကောင်းစွာ မြင်နိုင်ပါပြီ) | ကိုနန္ဒ
Home » Computer Software , Computer Software နှင့် နည်းပညာ » Viber For PC (ကွန်ပျူတာမှ Viber ကို မြန်မာလို ကောင်းစွာ မြင်နိုင်ပါပြီ)
Posted by nan da Posted on 08:01 with 22 comments
သူငယ်ချင်းတယောက် Cbox မှာ မေးလာလို့ ဒီနည်းလေး ရေးတင်လိုက်ပါတယ်။ အရင်က လည်း ၀က်ဆိုဒ်တွေ မှာ လည်း ဒီနည်း ကို ရေးင်္ပြီးသားပါ။ မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် နားလည်စေချင် တဲ့ စေတနာနဲ့ ကျနော် ကိုယ်တိုင် ပြန်လည် ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။
ကွန်ပြူတာ Viber မှာတော့ အားနည်းချက်တခု ရှိသေးပါတယ်။ အဲတာကတော့ စာရေးနေတုန်းမှာ တော့ အတုံးတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ Enter ခေါက်ပြီး ပို့လိုက်ရင် ကောင်းစွာ မြန်မာလို မြင်ရပါတယ်။ ဟိုက ပို့လာတဲ့ စာကိုလည်း မြန်မာလို ကောင်းစွာ မြင်ရပါတယ်။
ကွန်ပြူတာ Viber ရဲ့ ပိုထူးခြားချက်က ကွန်ပြူတာနဲ့ Viber သုံးသူအချင်းချင်း Video Call ပါ ရပါတယ်။ Viber မြန်မာစာပေါ်ဖို့က arial zawgyi.ttf ကို အရင် ဆုံး Install ရပါမယ်။ arial zawgyi.ttf ကို အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် arial zawgyi.ttf ကို Install နည်းကို အောက်မှာ ပုံ နှင့်ပြ ထားပေးပါတယ်။
Download arial zawgyi.ttf
Install ရင် ပုံကို ကြည့်လိုက်ပါ။
တခုတော့ ရှိပါတယ်။ Window XP မှာက Install မရပါဘူး။ Control Panel ထဲဝင် Fonts Foloder ထဲဝင်ပြီးတော့ arial zawgyi.ttf ကို Copy and Paste ချလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပြူတာအတွက် Viber ကို Install တဲ့ နည်းကိုတော့ ဒီလင့်မှာ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ။
Viber ကို Install ပြီး ဖုန်းနံပါတ် ထည့်ပြီး တာနဲ့ ဘာမှ ဆက်လုပ်စရာ မလိုတော့ ပါဘူး။ မြန်မာ လို ကောင်းစွာ မြင်နိုင်ပါပြီ။ တကယ်လို့ Mozlla Firefix မှာ မြန်မာစာ အပြည့်မပေါ်ပဲ အတုံးတွေ ဖြစ် သွားရင် ဒီလင့်မှာ ၀င်ကြည့် လိုက်ပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင် အားလုံး အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Daniel joab Myanmar 29 August 2015 at 03:38
Windows explorer နဲ့ ပိတ်ပိတ်သွားတယ် ကူညီပါဦး
Daniel joab Myanmar 29 August 2015 at 03:39
windows 10 desktop မှာမြန်မာစာမရဘူး အကိုကူညီပေးပါဦး
Lin Lin2March 2017 at 06:12
ငါလဲ windows 10 မြန်မာစာမှန်ဘူးဟ
Omair Rafi9December 2015 at 06:46
thank for teaching how to do the myanmar font and myanmar keyboard
too jangam 25 May 2016 at 01:48
kaung lay 15 August 2016 at 03:23
Google Chrome ကအမှန်မပေါ်ါ်ဘူး
dota lay9October 2016 at 07:24
download lo ma ya bu bro
Kyi Maung 24 October 2016 at 20:56
arial zawgyi font ကိုလင့်ကနေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်တာ မရဖြစ်နေပါတယ်။ 404 error
ဆိုပြီး ပြနေပါတယ်။ ဘယ်လို ဒေါင်းရမယ်ဆိုတာ ကူညီပေးပါ။
Ashin Pannavamsa 14 November 2016 at 13:04
ဟုတ်တယ်။ မရတာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမှတ်နေတာ။ မရတဲ့လင့်ကို မတင်ပဲ ရတဲ့လင့်ကိုပဲ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
hollow9December 2016 at 15:16
I can't type by zawgyi keyboard because of I already installed myanmar3keyboard and i don't know how to remove. Can anybody help me?
naimon chan7January 2017 at 17:39
Unknown 26 January 2017 at 16:31
It doesn't work. Please do something about it, Thank you.
ခောတ်တ(လု့ပြည်) 19 February 2017 at 23:46
ဒီလင့်မှာဒေါင်းလို့ရတယ် Bro တို့.. :)
Msai Xitu 27 March 2017 at 03:12
arial zawgyi.ttf က down လို့မ၇ဘူးဗျ 404 တက်နေတယ်
JamilaPollyannaMatha 14 April 2017 at 00:22
Unknown 19 June 2017 at 11:57
ဟုတ်တယ် ဒေါင်းလို့ မ၇ဘူးဗျ
Swan Htet Aung 14 May 2017 at 06:49
arial zawgyi ka error tat
bal lo lote ya ma lae
buy lite ya ma lar
Colin Ba Han 22 May 2018 at 04:39
Lwin Min Thant 28 November 2017 at 09:15
Unknown 23 June 2018 at 08:16
Unknown 10 December 2018 at 19:06